Barashada ilo kala duwan ayaa ah qayb muhiim ah oo ah istaraatiijiyad naftihureed. Hal tusaale ayaa ah habka cilmi-baarayaasha iyo beeralayda ay wax uga bartaan midba midka kale ee Barnaamijka Cilmi-baarista Cuntada ee Wadashaqaynta.
Sida Siyaabaha Kala Duwan ee Xaqiiqada iyo Aqoonta Waxbarashadayada
Marka la sii daayo McKnight's Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah 2019-2021, waxaan si joogto ah u bixin doonaa macnaha dheeraadka ah ee ku saabsan hal gaar ah oo dukumiinti ah. Halkan, Neeraj Mehta, Agaasimaha Waxbarashada, wuxuu la wadaagaa fikradaha mid ka mid ah hababka loo yaqaan 'philanthropic approaches' ee lagu soo bandhigay bogga 4-aad warqad buuxa. Neeraj wuxuu ka mid ahaa guddiga shaqaalaha guddiga ee soo saaray habdhismeedka.
Xarunta McKnight Foundation, waxaan bilaabay inaan si qoto dheer uga fiirsano xirfadaheena barashada si aan u fahanno sida xirfadahani u qaabeeyaan aragtida iyo dhaqanka, iyo inaan ogaano meesha aan ku horumarin karno. In our Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah ee cusub- Dukumeentiga hagaya jihaynteena iyo go'aan qaadashada saddexda sano ee soo socota - aasaaska ayaa ku qeexan dadaalka qoto-dheer ee barashada ka timaadda meelo kala duwan xaqiiqda iyo aqoon.
Waxay u egtahay wax la yaab leh maadaama uu yahay Agaasimaha ugu horeeya ee waxbarashada, waxaan ka fekeraa barashada waqtiga oo dhan. Cilmi baaris waxay muujineysaa in ururradu diiradda saaraan barashada samaynta doorashooyin ka fiican, inay yeeshaan waxqabad wanaagsan, iyo inay si fiican u qabsadaan xaaladaha aan la hubin iyo cadaadiska. Waxaan rumaysnahay in ay tahay jawi waxbarasho oo qotodheer, oo lagu dhisay barnaamijyo gaar ah iyo guud ahaan ururka, xoojin doono kartideena inaanu noqono, sida Kate Wolford, madaxweynaha McKnight, wuxuu inta badan yidhaahdaa, "aamminaad badan, wax ku ool ah, oo wax ku ool ah."
Iyada oo aan doorto, waxaan doonayaa inaan dhiso dhaqanka, istaraatiijiyada, nidaamyada, iyo ogaanshaha-sida noo ogolaanaya inaan barano oo aan la qabanno dadka kale, marka la eego dhibaatooyinka adduunka ee aynu wadaagno.
"... maxaa muhiim ah maaha kaliya waxa aan ognahay, laakiin cida aynu og nahay; in marka aynu keeno ilo kala duwan oo aqoon iyo dad kala duwan isugu jira, waxaan leenahay fursad wanaagsan oo lagu fahmo arimaha cakiran ... " -NEERAJ MEHTA, MAS'UULKA WAXBARASHADA
Waxaan aaminsanahay in barashada mabda'a ah ee mabaadi'da xaqsoorka iyo qiimaha xooggan ay noqon karaan xajin:
In la qiimeeyo qiimaha buuxa iyo qadarinimada aqoonta iyo xikmadda dhaqameed ee si toos ah uga soo jeeda dhaqanka bulshada ama khibradda, halkii ay ku qeexi lahaayeen xaqiiqda iyo aqoonta dareenka adag ee adag, sida ka soo baxa cilmi-baarista
Horumarinta sinnaanta iyo wax ka qabashada taariikhda isir-dhiska iyo qaab-dhismeedka midab-kala-sooca ee bulshada iyo bulshada
Horumarinta weyn ee nidaamyada istiraatiijiga ah ee badanaa aan si fiican loo fahmin ama loo xalin "cilmi-baaris" kaliya, "khabiir" ayaa si kooban loogu qeexay cilmi-baaris ama rasmi ah
Eegidda dadka iyo jaaliyadaha oo aan ahayn kuwa ka faa'iideystayaasha ah, laakiin ahaanshaha haysta xikmad, awood, iyo hay'ad
Qaadashada / Labaad
McKnight, waxaan qaadanaa "labadaba / iyo" qaabka loo qiimeeyo caddaynta sayniska, falanqaynta xaqiiqda ku salaysan, iyo xogta madaxbannaan, iyo sidoo kale aqoonta dhaqamada kala duwan iyo qodobada muhiimka ah.
Waxaan baranayey casharo muhiim ah mudadii labaatankii sano ee u shaqaynayey isbedelka bulshada ee ururinta bulshada, horumarinta bulshada, cilmi baarista jaamacadda, iyo ugu dambayn, doorka McKnight. Marka hore, fikirka ugu wanaagsani waa kaliya oo la bilaabi karo fahamka waxa ka dhacaya adduunka, adoo xoogga saaraya guusha dadaalkeena, iyo go'aaminta waxa dhici doona xiga. Marka labaad, anaga si dhab ah ayaan u fahmi karnaa dhibaatada oo aan xal u helno, waa in aan dib u eegno derbiyadaha aasaasiga ah.
Ugu dambeyntiina, waxaan ogaaday in waxa muhiimka ahi aysan ahayn waxa kaliya ee aanu ognahay, laakiin cidda aynu ku garanayno; in marka aynu soo bandhigno noocyo kala duwan oo aqoon iyo dad kala duwan, waxaan leenahay fursad wanaagsan oo lagu fahmo arimo adag, ballaarinta waxa aan u maleyneyno in ay suuragal tahay iyo muhiim ah, iyo abuuritaanka abuurista.
Sidee hababkani u khuseeyso si naxariis leh
Waxbarashadu waxay noqotay qayb muhiim ah oo ah istaraatiijiyad naftihureed. Waxaan u aragnaa istiraatiijiyadayada marka ay timaaddo halkii ay joogtada ahayd, iyada oo la adeegsanayo macnaha isbeddelka iyo casharradii loo bartay si ay ula qabsadaan una qabsadaan waqtiga dhabta ah. Maalin maalintiiba, waxay u egtahay:
Horumarinta awooda cusub ee aasaasiga ah, iyo helitaanka siyaabo cusub oo loo soo saaro oo loo simo aqoonta guud ahaanba arrimaha aan ka shaqeyno iyo meelaha aan ka shaqeyno
Ka fekeraya sida aynu, aasaas u baraneyno, kana baraneyno lamaanayaasha deeq bixiyeyaasha, iyo sida ay lamaanaheena deeqbixiyeyaashu u bartaan iyo midba midka kale
Taageerida iyo barashada ee ka Qorshaha Qiimaynta Caddaaladda, dadaal qaran oo lagu badalayo sida aasaasku u fahmi karo, u hirgeli karo, uuna u adeegsan lahaa barashada iyo qiimeynta qaab haboon, oo kor u qaada, sinaanshaha jinsiyada
Taageeridda dhaqannada jira, sida kuwa naga mid ah Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada, si loo hubiyo in cilmi-baarayaasha beeraha iyo shabakadaha beeraleyda ay si wadajir ah u shaqeynayaan si ay wax uga qabtaan caqabadaha iyo aqoonsiga fursadaha; ama noo Barnaamijka farshaxanka Shaqaalaha, oo, weheliya maalgeliyeyaasha kale ee degaanka, ayaa si ula kac ah u dhisaya beesha iyo barashada laga soo bilaabo Twin Cities Tiyaatarka hababka isuduwidda jimicsiga iyo qaababka ee deeqaha ku jira oo muddo aad u dheer laga dhigay ururada farshaxanka ay hoggaaminayaan dadka midabka
McKnight, waxaannu dhiseynaa awooddeena inaanu ka dhigno ilo kala duwan oo ah xaqiiqooyinka iyo aqoonta adeegsiga barashada la adeegsado. Waxaan rabnaa inaan si macquul ah u qaadano xaqiiqda iyo aqoonta ballaarinta sida aan wax uga baran karno aragtiyo kala duwan, sida aan u matalno xaaladaha iyo dhibaatooyinka, iyo sida aan u aragno sabab iyo saameyn. Ugu dambeyntii, waxbarashadani waxay naga caawineysaa in aan abuurno xeelado wax ku ool ah si loo gaaro isbeddel nidaamyo waaweyn-xoojinta tallaabooyinkeena iyo tallaabooyinka naga helaya deeq bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah